M० Mb फाइबर अप्टिक दर सम्झौता पदोन्नति मा मात्र € १..50० प्रति महिना | ग्याजेट समाचार
ईडर एस्टेबान | | सामान्य
घरको दर धेरै परिवर्तन भएको छ। अब, एकल शुल्कको साथ, हामी प्राय जसो हामीलाई हाम्रो घरमा चाहिने धेरै सेवाहरू कभर गर्दछौं। त्यसोभए एकल दरको साथ हामी धेरै महत्त्वपूर्ण अवस्थाहरू पूरा गर्दछौं। यद्यपि यो सामान्यतया एक उच्च मूल्य शामिल छ। तर समय समयमा हामीसँग छ एक Movistar जस्तै पदोन्नति आज हामीलाई ल्याउँछ। उनीहरूलाई धन्यवाद हामी धेरै पैसा बचाउन सक्छौं।
यो बारेमा छ M० एमबी फाइबर अप्टिक दर जुन अब यो प्रमोशनमा विशेष मूल्यमा उपलब्ध छ। यस प्रकार, तपाईले केहि उत्तम मोभिसार सेवाहरू सामान्य भन्दा धेरै कम तिरेर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। उत्तम दरहरूको मजा लिनु महँगो हुनु पर्दैन। हामी तपाईंलाई तलको यो दरको बारेमा बढि बताउँछौं।
सस्तो फाइबरको मजा लिनुहोस्
प्रस्तावको फाइदा लिनुहोस् र ल्यान्डलाइनमा नि: शुल्क कलको साथ ist० Mb मोभिसार फाइबर पाउनुहोस् र to50० मिनेट मोबाईलमा केवल € १..550० प्रति महिना।
म प्रस्ताव चाहन्छु!
यो हाम्रो घरको लागि डिजाइन गरिएको दर हो। यसमा हामी हाम्रो ल्यान्डलाइन फोनबाट फाइबर अप्टिक्स र कलहरू मार्फत एउटा इन्टरनेट जडान फेला पार्दछौं। यसैले यसमा सब भन्दा महत्वपूर्ण र आधारभूत सेवाहरू समेटिएका छन्। यी दुई सेवाहरू बचत गर्न चाहने परिवारहरूका लागि साथै घरबाट काम गर्नेहरूका लागि राम्रो दर। किनभने हामीसँग छ राम्रो इन्टरनेट जडान र ल्यान्डलाइनबाट कलहरू.
1 फाइबर अप्टिक दर Movistar को 50 Mb
2 यो मोभिसार दर कसरी संकुचन गर्ने?
फाइबर अप्टिक दर Movistar को 50 Mb
यो एक दर हो जुन सेवाहरू कभर गर्दछ जुन उपभोक्ताहरूको बहुमतले माग गर्दछ। र अब विशेष मूल्यमा उपलब्ध छ जुन हामीलाई धेरै बचत गर्न अनुमति दिन्छ। जस्तो यस पदोन्नतिको लागि धन्यवाद हामी ट्यारिफमा एक वर्षको उपभोग बचत गर्न सक्छौं। एक महत्त्वपूर्ण रकम र त्यो पक्कै हाम्रो खल्तीले धेरै प्रशंसा गर्नेछ।
सबै भन्दा पहिले हामी तपाईंलाई देखाउँदछौं सेवाहरू जुन दर समावेश गर्दछ र उही सर्तहरू। ताकि तपाइँ मोभिस्टारले हामीलाई यस विशेष पदोन्नतिमा के प्रस्ताव राख्नुहुन्छ भन्ने बारे थोरै जान्न सक्नुहुन्छ:
स्थिरता: स्थायीताको मात्र १२ महिना
घरमा इन्टरनेट: M० एमबीपीएस (फाइबर अप्टिक)
मोबाइल कलहरूमा स्थिर: प्रति महिना 550० मिनेट
फिक्स्ड कलमा स्थिर: असीमित
इन्टर्नेट कभरेज: Movistar
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, यसले हामीलाई एक उत्कृष्ट इन्टरनेट जडान गति प्रदान गर्दछ, जसले हामीलाई नेभिगेट गर्न र काम गर्न वा सक्षम गर्न वा कुनै पनि समस्या बिना हाम्रो मनपर्ने सामग्रीको उपभोग गर्न सक्षम गर्दछ। थप रूपमा, ल्यान्डलाइनको साथ हामी अन्य ल्यान्डलाइनहरूमा असीमित कलहरू गर्न सक्दछौं। हामीसँग मोबाईल फोनमा कल गर्न month550० मिनेट छ। यसैले हामीसँग पनि यस सम्बन्धमा धेरै स्वतन्त्रता छ।
यो Movistar दरको लागत कति छ? यो पनी यो प्रश्न हो कि तपाई मध्ये धेरैले सोध्नु भएको छ। यस दरको मूल्य १ month.14,90 ० युरो प्रति महीना हो, यदि लाइन शुल्क समावेश गरीएको छैन। यो पहिलो बाह्र महिनाको समयमा तिर्नको लागि मूल्य हुनेछ। लाइन शुल्क सहित, मूल्य फरक छ, यो प्रति महिना .२.32,30० युरो हुन्छ। दरका लागि पर्याप्त सस्तो मूल्य।
दुबै केसहरूमा, यो मोभिस्टार दरको मूल्य अन्तिम मूल्य हो। त्यसैले हामीसँग पहिले नै तिनीहरूमा भ्याट समावेश छ। त्यसैले हामीले कुनै पनि केसमा बढी पैसा तिर्नु पर्दैन। सबै समयमा अन्तिम ग्यारेन्टी मूल्य यही हो।
यो मोभिसार दर कसरी संकुचन गर्ने?
यस प्रचारक दरमा रुचि छ? तपाईं अब यो भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले त्यहाँ यो उत्तम प्रस्ताव प्राप्त गर्न सक्षम हुन कुनै पर्खाइमा छैन।
यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ र यो पदोन्नती प्राप्त गर्ने अवसर गुमाउन चाहनुहुन्न भने, तपाइँ सजिलैसँग यहाँ बुक गर्न सक्नुहुन्छ अर्को लिंक। यो लिंकमा तपाईसँग छ दरको बारेमा सबै आवश्यक जानकारी र यसलाई सम्झौताको अनुसरण गर्नका लागि चरणहरू। त्यसो भए तपाईलाई यस सम्बन्धमा कुनै समस्या हुने छैन। तपाइँ यो नयाँ मोभिसार प्रमोशनको बारे के सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » Movistar एक विशेष मूल्य मा M० Mb फाइबर ऑप्टिक दर प्रदान गर्दछ
हामी तपाईको पार्टीहरुलाई संगठित गर्न ऊर्जा पार्टी 6, ऊर्जा सिस्टेम विकल्पको विश्लेषण गर्दछौं